Yizikhokho iTigers yaseThembalihle | News24
Yizikhokho iTigers yaseThembalihle
Abadlali nabaphanthi beqembu likanobhutshuzwayo i-Tigers yaseThembalihle bakhombisa izinto ezithole ngokunqoba emqhudelwaneni obizwa ngele-Easter Tournment eCramond ngeSonto. PHOTO: jerry barnes
IQEMBU laseThembalihle kuWard 34, iTigers, lishaye kwasani emqhudelwaneni omkhulu oqale ngempelasonto yePhasika yaze yaphela ngeSonto eledlule.
Lo mqhudelwano owaziwa ngele-Easter Tournament ubusenkundleni yezemidlalo iThokozane ngaseCrammond.
I-Tigers ephethwe uKhule Madlala ibe yizikhokho emva kokashaya konke obekuphambi kwayo kulo mqhudelwano ubuhlanganise amaqembu angama-28. Noma le midlalo yaqala ngePhasika ize yaphothulwa ngeSonto eledlule ngendlela ebimikhulu ngayo. Ibixhaswe uMasipala uMshwathi noMnyango wezeMidlalo nokuNgcebeleka.
Omunye wabagqugquzeli uMabusi Hlongwa uthe le midlalo yaqala imincane ngeminyaka ye-1996 kanti isikhule ngale ndlela yokuthi izinsuku zempelasonto eyodwa azisanele ukuyiphothula.
“Bheka nje size sathatha izimpelasonto ezithi azibe zintathu ukuphothula yonke into,” kusho uHlongwa.
Kumafayineli iTigers ihlule uMshathi FC ngelilodwa eqandeni, emdlalweni othathe izihlwele eziningi ngendlela exakayo.
“Mina ngingathi nje besizimisele ngoba phela nangonyaka odlule sasingoshampeni. Futhi-ke nabadlali bakwazile ukulandela imiyalelo yomqeqeshi,” kusho uMadlala